विद्यालयीय शिक्षा र हाम्रो व्यवहार | चितवन पोष्ट
22 11 19, Friday
विद्यालयीय शिक्षा र हाम्रो व्यवहार
शिक्षा सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । विकट दूरदराजको गरिबको सन्तान होस् या सुविधासम्पन्न सहर या धनाड्य परिवारमा जन्मेको बालक होस्, उसलाई शिक्षा पाउने हक हुनेछ । यो हकलाई नेपालको संविधानले पनि सुरक्षित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह (०–८) सम्म अनिवार्य र निःशुल्क अनि माध्यमिक तह (९–१२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानले नै तोकिदिएको छ । संविधानको यही मर्मअनुसार नै शिक्षा ऐन र नियमावली बनेका छन् । यी नियम त बने किताबका ठेलीहरूमा, तर के यही नियमले सबै समाज, वर्ग, जात, क्षेत्र वा फरक–फरक मनोसामाजिक अवस्थाका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याऊलान् त ? यो सोचनीय विषय हो ।
तथ्यांकले चाहिँ के देखाइरहेछ त ? थोरै यसबारे बुझौँ । शैक्षिक सत्र २०७५ मा आधारभूत तह उमेर समूह (५–१२ वर्ष) को विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या ८.७५ देखाएको छ । माध्यमिक तह उमेर समूह ( १३–१६) को १२ कक्षासम्मको टिकाउ दर नै १७.२५ देखाउनुले कति बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् त भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिदिएको छ । यी बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन र टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता योजना, अभियान र कार्यक्रमहरु ल्याउँदै छ भन्नेमा शैक्षिक सरोकारवाला नै अनभिज्ञ छन् । यसको अर्थ कि त सरकारका कार्यक्रम नै छैनन् कि ती प्रभावकारी बनिरहेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।
यसबीच, शैक्षिक सत्र २०७६ को विद्यालय भर्ना अभियान ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ : सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔँ’ भन्ने नाराका साथ मनाउने उद्घोष सरकारले गरेको छ । हुन पनि प्रत्येक वर्ष सरकारले यसरी नै एउटा न एउटा नारा तय गरेर भर्ना अभियान सञ्चालन त गर्छ, तर विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका लक्षित प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय एकता खेर नजाओस्
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा
मेडिकल कलेजको ठगी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ब्रह्मलुट
मेरा एक जना अनन्य मित्रले सोध्नुभयो– अब छोराको स्कुल पठाउने उमेर भयो, कुन स्कुल पठाउने होला ? कुन स्कुलमा राम्रो पढाइ होला ? उहाँलाई मैले जबाफ दिएँ– जुन स्कुलमा तपाईंको छोरा स्वतन्त्र र सुरक्षित हुन्छ त्यहीँ पठाउनुहोला । धेरै पढाउने स्कुल होइन, तपाईंको छोरालाई धेरै खेलाउने अनि खुसी राख्न सक्ने, खुला वातावरण भएको, तपाईंको छोराका कार्य र व्यवहारको सम्मान पाउने स्कुलमा पठाउनुहोस् । उहाँलाई मेरो सुझावले चित्त बुझ्यो वा बुझेन, त्यसलाई मैले मुख्य विषय मानिनँ तर मैले भने सही सल्लाह नै दिएँ भन्नेमा ढुक्क छु ।
हाम्रो समाजमा बाल मनोविज्ञान र व्यवहारलाई खासै चासो दिइँदैन । जतिबेला पनि पढिरहोस् । परीक्षामा उच्च अंक प्राप्त गरोस् । कक्षामा नबोली बसोस् । घरमा पनि कुनै काममा दखल नदेओस् भनी बालकको व्यवहारलाई नियन्त्रित अनि पढाइलाई संवेदनशील मानी निकै मह¤व दिइन्छ । हाम्रो दृष्टिकोणबाट त ठीक होला तर एकपटक बालक बनेर सोचौँ त, हाम्रा यी व्यवहार बालकका लागि केकति उपयुक्त होलान् ?
बरू आधी पेट नै बस्नु किन नपरोस्, सन्तानको पढाइका लागि ठूलै राशि खर्च गर्न तयार हुन्छौँ । १० बजेदेखि ४ बजेसम्म स्कुलको कडा अनुशासनमा बसेर पढ्दा पनि हामी अभिभावक सन्तुष्ट हुन्नौँ, अनि बिहान सबेरै र राति अबेरसम्म ट्युसन र कोचिङमा आफ्ना नानीबाबुलाई व्यस्त राख्न मन पराउँछौँ । कोही पास गराउन, कोही उच्च ग्रेड ल्याउन त कोही कक्षामा पहिलो गराउन पढाइरहेका छौँ । सिकाइका यी सब बाधक हुन् भन्ने बुझाउन हाम्रो समाजमा निकै कठिन छ । हामी आफन्त, समाज र परिवेशसँग बालकलाई परिचित गराउनभन्दा पढाइमा मात्र ध्यान देओस् भन्ने चाहन्छौँ । यस्तो व्यवहारबाट हामी आफ्ना बालबालिकालाई समाजसँग अनि प्रकृतिसँग कसरी परिचित गराउन सक्छौँ ? त्यसलै हामी बच्चालाई पढाइरहेका छैनौँ, उनीहरुको सिर्जनशीलता र मौलिकतालाई निमोठिरहेका छौँ ।
भ्रमण, खेल, साथीसंगी र प्रविधिलाई हामीले सिकाइसँग जोड्न किन सकिरहेका छैनौँ ? यो आजको शैक्षिक प्रणालीको गम्भीर चुनौती बनिरहेको छ । बालक जेमा रमाउँछ त्यसैका माध्यमबाट सिकाउने तरिकाको विकास हामीले कहिले गर्ने ?
हामी चाहन्छौँ– सकेसम्म बालक पढिरहोस्, विद्यालयमा पनि र घरमा पनि । ऊ साथीहरुसँग नखेलोस् । टिभी नहेरोस् । मोबाइल पनि नचलाओस् । अनि, आफूले गरिरहेको काममा पनि कुनै दखल नपु¥याओस् । धेरै पढेर परीक्षामा उच्च अंक प्राप्त गरोस् । सिकाइमा भन्दा हामी अभिभावक अनि शिक्षक पनि उच्च अंक प्राप्तिकै भूतले ग्रस्त छौँ र बालकलाई पनि त्यसैमा प्रेरित गर्दैछौँ । यसले बाल मानसिकतामा सिकाइमा सहकार्यभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा, ईष्र्या र आपसी द्वन्द्वात्मक संवेगको विकास गराइरहेको छ । जुन व्यावहारिक नभएर कोरा किताबी, अव्यावहारिक, कम गुणस्तरीय र अनुत्पादक सिकाइ बनिरहेको छ ।
सबै बालबालिका एकै खालका कहाँ हुन्छन् र ? उनीहरुमा विविधता हुन्छ र हुनैपर्छ । त्यो विविधताको सम्मान न हाम्रो सिकाइ प्रणालीले गर्न सकिरहेको छ, न हमी कक्षाकोठा र घरसमाजमा गर्न सकिरहेका छौँ ।
हामी आफ्नो सन्तान अरुभन्दा अब्वल र क्षमतावान् बनोस् भन्ने चाहना राख्छौँ, यो स्वाभाविक पनि हो । तर, यसका लागि हामीले गरिरहेका प्रयासहरुले बालकको पढाइमा दूरगामी नकारात्मक असर पु¥याइरहेको त छैन ? नियमिन ट्युसन र कोचिङ, परीक्षामा उच्च स्थान र प्रतिशत वा ग्रेड प्राप्तिको प्रयासजस्ता कुराहरुले बालबालिकाको मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पारिरहेको होला ? के यसबारे हामी जानकार छौँ ? हरेक अभिभावक र शिक्षकले यो विषयमा विचार पु¥याउनैपर्छ ।
अहिले सानै उमेरमा विद्यालय पठाउने चलन बढेको छ । सानै उमेरमा विद्यालयबाट केही पढेर आओस् भन्ने चाहना अभिभावकमा भएको पाइन्छ । विद्यालय प्रशासनले पनि अभिभावकले सन्तानका लागि जब लगानी गरेको छ भने उसले भनेअनुसार नै शिक्षकले पढाइदेओस् भन्ने चाहना राख्छ । शिक्षकमा पनि जसरी भए पनि सिकाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । बालमैत्री नवीन विधि र पद्धतिको खोजीमा लाग्नुभन्दा मानसिक र शारीरिक दण्डले भए पनि क, ख र ए बी सी घोकाउने सजिलो तरिकातिर शिक्षक लाग्दा मर्कामा पर्छ कलिलो बालक अनि जन्मन्छ अरूचिकर सिकाइ । नारामा मात्र सीमित रहन्छ बालमैत्री सिकाइ । अनि, एउटा कलिलो बाल मानसिकतामा पढाइप्रति कस्तो धारणाको विकास होला ? सानै उमेरमा सिकाइका लागि हामी यसरी दबाब दिन्छौँ भने उसले कहिलेसम्म दबेरै पढ्न सक्ला ? यस्तो बोझिलो सिकाइबाट के उसले उन्मुक्तिको बाटो नखोज्ला र ? हो, यहीँबाट बालकमा बिस्तारै सिकाइप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै जान्छ, अनि सुरू हुन्छ उल्टो गति । सानामा पढ्न टाठा पनि पछि बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन् । अनि हामी भन्छौँ– पढ्दै पढ्दैन, जान्दै जान्दैन, पढाइप्रति रूचि नै छैन । नपिटी पढाउने र बालमैत्री सिकाइ भनेको त किताबमा पढ्ने सिद्धान्त पो ! नपिटी पढ्दैन । यो पिटाइको संस्कार कहिलेसम्म ? यो दबाबको सिकाइ कहिलेसम्म ? यस्तो अवस्था आउनुमा दोषी को ?
फिनल्यान्डमा बालबालिकाको सिकाइ मापनका लागि परीक्षा नै लिइँदैन । उनीहरुको व्यवहार र उमेरका आधारमा निश्चित ग्रेडमा राखेर सिकाइन्छ । बालकलाई गृहकार्य दिइँदैन । सिकाउनुपर्ने कुरा खासै जटिल नै हुँदैन । सिकाइ बालमैत्री र रूचिकार हुन्छ । बालकलाई मन नपर्ने विषय सिक्नलाई कर नै गरिँदैन । सिकाइ प्रविधियुक्त हुन्छ । फिनल्यान्डको विद्यालयीय शिक्षा विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ । त्यस्तै, क्यानडाको विद्यालयीय शिक्षा पनि विश्वकै उदाहरणीय मानिन्छ । त्यहाँ विद्यार्थी विद्यालय जाँदा कापी र किताब बोक्दैनन् । कम्प्युटर र मोबाइल एप्सबाट नै विद्यार्थीलाई सिकाइन्छ । शिक्षकलाई ज्ञानको स्रोत मानिँदैन । केवल सहजकर्ताका रुपमा मात्र विद्यार्थीको सिकाइमा सहजीकरण गरिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ कोरा किताबी ज्ञान होइन, सिकारूको व्यवहारमा केकति परिवर्तन आयो त्यसकै आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ ।
अब हेरौँ, हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो विद्यालयीय शिक्षा कहाँ छ ? हामी केका लागि पढाइरहेका छौँ ? हाम्रो उत्तरदायित्व के हो ? मैले पढाएको विद्यार्थीले यति जीपीए ल्यायो । मेरो छोरो प्रथम भयो । उसकी छोरीभन्दा मेरी छोरी अब्बल छे । यी सब हाम्रा व्यवहारले बाल मानसिकतामा कस्ता संवेग उत्पन्न होलान् ? यी विषयलाई हामीले सामान्यरुपमा लिएका छौँ होला, तर यी सब संवेदनशील छन् । हाम्रा यस्ता व्यवहारले बालकहरु दबाब महसुस गर्छन् । यसले उनीहरुको मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पु¥याइरहेको हुन्छ ।
मेरो पन्ध्रवर्षे शिक्षण अनुभवमा अभिभावकहरुका धेरै गुनासो सुनेको छु । गृहकार्य कम भो । पढाइप्रति रूचि नै दिँदैन । खालि मोबाइल, टिभी अनि खेलतिर मात्र ध्यान दिन्छ । हामीले त पढ्न सिकाएका छौँ । तर, यी सब कसरी ? उसो भए बालकहरुले सिकाएका कुरामात्र होइन नसिकाएका कुरा पनि देखेर थाहै नपाई सिक्दा रहेछन् । के अब हामी पढाइलाई खेल, मोबाइल र टिभीजस्ता बालकका रूचिका विषयसँग जोड्न सक्दैनौँ । यसको प्रयास हामीले कहिले र कति ग¥यौँ त ? सिक्दै छु भन्ने कुरा सिकारूले थाहै नपाई सिक्ने रूचिकर तौरतरिकाको खोजी हामी किन गर्दैनौँ ? अब कहिले गर्छौं त ?
त्यसैले, हामी पढाइमा बालबालिकालाई त्यति धेरै दबाब दिन छोडौँ । आफू पनि बालबालिकासँगै बसेर पढौँ । बालबालिकाका रूचिका विषय पहिचान गरी सोहीअनुसारका सामग्री उपलब्ध गराउने गरौँ । शिक्षकले पनि सिकाउनुपर्ने कुरा कक्षाकोठामै रोचक विधिमार्फत सिकाउने प्रयत्न गरौँ । सकेसम्म गृहकार्य नदिँदा नै राम्रो । पढाइसँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलकुदमा पनि बालकलाई सरिक गराउने गरौँ । मूल्यांकन पद्धतिलाई परिवर्तन गरी खुकुलो बनाऔँ । परीक्षालाई दबाब र प्रतिस्पर्धाका रुपमा नभई सामान्य प्रक्रियाका रुपमा सिकारूसामु प्रस्तुत गरौँ । घर, समाज र विद्यालयमा बालबालिकालाई डर र त्रासले होइन माया, ममता र सम्मान गरौँ ।
सिकारूको पहिलो विद्यालय घर नै हो । घर र समाजबाट नै सिकाइको सुरूवात हुने भएकाले घर, समाज र विद्यालयको वातावरण र व्यवहार बालमैत्री बनाउने प्रयत्न गरौँ । अनि बल्ल विद्यालय भर्ना अभियान सफल हुन सक्छ । विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन सकिन्छ । तपाईं हामी सबै मिलेर विद्यालयीय शिक्षा सुधारमा जुटौँ ।
२०७६ मंसिर ६ गते शुक्रबार
२०७६ मंसिर ५ गते बिहीबार
२०७६ मंसिर ४ गते बुधबार
२०७६ मंसिर ३ गते मंगलबार
बालबालिका संरक्षणमा चुनौती